Amanqaku kaJuliette Anderson malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UJuliette Anderson
UJuliette Anderson yingcali yoLuntu yokuFikelela kwinkampani ye-e-commerce yokuzalisekisa egxile ekusebenzisaneni nabathengisi abakwi-Intanethi abanobunzima beepasile ezingama-5 + okanye ngaphezulu. Usebenza ngokubambisana neevenkile ze-e-commerce ukufezekisa intengiso efanelekileyo iminyaka emine. Ubungcali bakhe bulele kwintengiso yemidiya yoluntu kunye nokunyuselwa okuhlawulelweyo.
Uphengululo lweMveliso ye-E-yorhwebo: Izizathu ezi-7 zokuba uPhononongo lwe-Intanethi lubalulekile kwiBrand yakho
NgoMvulo, nge-14 kaJanuwari, 2019 NgoLwesine, Meyi 7, 2020 UJuliette Anderson
Umntu unokuba uqaphele ukuba kuya kusiba yinto exhaphakileyo kumashishini, ngakumbi lawo akwicandelo le-e-commerce, ukubandakanya uphononongo kwiiwebhusayithi zabo. Ayisiyomeko yefashoni, kodwa luphuhliso olubonakalise ukuba lusebenza kakuhle ekufumaneni ukuthembela kwabathengi. Kumashishini e-commerce, kubalulekile ukuphumelela ukuthembela kwabathengi, ngakumbi okokuqala, kuba akukho ndlela kubo yokubona